बिहीबार मध्यान्ह सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा सांसद योगेश भट्टराई पत्रकारहरुले घेरिएका थिए । उनीसँग अन्तर्वार्ता तथा बाइट लिन टीभीको बुम तेर्सिएको थियो । उनले भ्याएसम्म सबैलाई समय दिइरहेका थिए । भेट्न आउने हरेक पत्रकारलाई उनले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीका मागबारे’ लेखिएको दुई पन्ने कागज पनि थमाइदिन्थे ।
नेकपाका युवा नेता भट्टराईले वितरण गरेको नोटमा विधेयकबारे १० बुँदा छन् । त्यसमा डा. केसीका तीन सवाल भनेर जवाफ लेखिएको छ । भट्टराईको निष्कर्ष छ, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीको अधिकांश माग पूरा भइसक्यो ।
यसबारे बहस गर्दैगर्दा के बिर्सन हुँदैन भने चिकित्सा शिक्षा भनेको विशेष शिक्षा हो । यसमा अरुजस्तो पढ्ने र पढाउने मात्र भएर चल्दैन, समुदाय अर्थात बिरामी पनि चाहिन्छ । फेरि, कसैले मसँग पैसा छ, म मेडिकल कलेज खोल्छु भनेर मात्र हुँदैन । उदारहरण लागि खसीबजारको नेशनल मेडिकल कलेजलाई हेरौं ।
अहिले आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले के गर्‍यो त ? गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका जस्तो छ, त्यस्तै रह्यो । नियमनकारी निकायलाई झन अस्तव्यस्त बनायो । सरकारी लगानीबारे जुन अनिश्चितता थियो, त्यो कायमै रह्यो ।
किनभने, कांग्रेसका मेडिकल कलेजहरुले कमाए, अब हाम्रो खुल्दैछ, त्यसले पनि १० वर्ष कमाउन पाउनुपर्छ । के आधारमा आशयपत्र लिएको कलेजले १० वर्ष कमाउन पाउनुपर्छ ? भन्दा यो ‘हाम्रो’ हो । यो त भन्न पनि लाज लाग्नु पर्ने हो ।
र, डा. केसीबारे
चिकित्सा शिक्षाबारे यत्रो चर्चा गर्दा डा. केसीको कमजोरीबारे पनि बहस गर्न उपयुक्त नै हुन्छ । जसरी माथि योगेश भट्टराईको व्यक्तिगत निष्ठामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन भनियो, डा. केसीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ ।
शायद डा. केसीले अनसन नबसेका हुन्थे भने अहिले त्रिवि र केयु सम्बन्धन विक्री गर्ने थलोभन्दा धेरै भिन्न हुँदैनथ्यो होला । अनि खसीबजारमा खुलेको जस्तो मेडिकल कलेजहरु धेरै खुलिसक्थे । चिकित्सा शिक्षाबारे यत्रो बहस पनि हुन्थेनहोला ।
साथै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे उनले उठाएको प्रश्न पनि कुनै समयमा ‘३० दल’ले जारी गरेको वक्तव्य भन्दा फरक छैन, जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ नै, उनले पवित्र आन्दोलनलाई पनि धमिलो बनाउनसक्छ ।
डा. केसीका राजनीतिक माग पूरा हुँदैनन : शिक्षामन्त्री पोखरेल
आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै भारु नोट चलाउन दिन आग्रह
जब होनाहार युवाका दुवै मिर्गाैला फेल भए
‘विप्लवले दुःख दिए, राजनीतिक समाधान खोज’
महाभियोगले न्यायाधीशमा मनौवैज्ञानिक असर पार्छ
१२ बर्ष संपर्कमा नआए वा बेपत्ता भए मृत्यु भएको मानिने
गोरखापत्रका महाप्रबन्धक उपाध्यायलाई सरकारले हटाउने, सर्वोच्चले थमाउने!
बेगनासमा बेपत्ता ६ जनाको शव भेटियो, लाइफ ज्याकेट नलगाउँदा दु:खद् घटना
रवीन्द्रजीहरुको बुझाइ नै फरक रहेछ : रञ्जु दर्शना